सानोतिनो रोगमा कडा एन्टिवायोटिक - Health Today Nepal
सानोतिनो रोग लागेका बेला समेत कडा खालको एन्टिवायोटिक औषधि दिने र खाने चलन समान्य जस्तै भइसकेको छ । तर यसले पार्ने प्रभावका बिषयमा अधिकांश उपभोक्तालाई जानकारी छैन । एन्टिवायोटिक औषधि डाक्टरको प्रिस्किृप्सन बिना बेच्न र उपभोग गर्न पाइदैन् । यो अन्तर्राष्टिय मान्यता हो । तर नेपालमा यो नियम न औषधि बिक्रेताले पालना गरेका छन न औषधि किनेर खाने उपभोक्ताले नै यसका विषयमा हेक्का राख्ने गरेका छन । नेपालमा अहिलेसम्म कुन किसिमको रोगमा कुन स्तरसम्मको एन्टिवायोटिक्स बिक्री गर्ने वा उपभोक्ताले खाने भन्ने कुनै गाइडलाइन छैन । त्यसैले औषधि दिने र लिने दुबैले मनपरि तरीकाले एन्टिवायोटिक्स सेवन गरिरहेका छन । छिटो रोग निको पार्न एन्टिवायोटिक्सको सेवन गर्ने गरिएको पाइन्छ । एक्टिवायोटिक्सलाई रोग निको पार्ने अचुक उपायको रुपमा हेर्ने गरेकाले यसले स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पारिरहेको विज्ञहरु बताउछन । मिर्गौला प्रत्यारोपण विज्ञ डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठ भन्छन, एन्टिवोयोटिक्सको सही तरीकाले उपभोग गर्न नसकिए अभिषाप पनि बन्छ भन्ने कुराको ज्ञान धेरैलाई छैन । जसका कारण मिर्गौला बिग्रनेदेखि विभिन्न स्वास्थ्य समस्याको जन्म हुन्छ । जथाभावी एन्टिवोयोटिक्स सेवनकै कारण वर्षेनी दुई हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाउने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । डिप्रेसनमा परेका व्यक्तिहरुले रातमा निद्रा नआएपछि निद्रा आउने औषधि आवश्यक भन्दा बढी सेवन गर्दा ज्यान समेत जाने गरेको छ । कोही रोग निको पार्ने निहूमा डोजभन्दा बढी औषधि एकै पटक खाइदिने त कोही एउटा रोगका लागि सेवन गर्नु पर्ने एन्टिवोयोटिक्स अर्को रोग निको पार्न खाइदिने गर्छन । कोही आफु खुशी औषधि पशलबाट एन्टिवायोटिक्स किनेर खाने गर्छन । मनपरि एन्टिवायोटिक्सको सेवनले समस्या निम्त्याएको चिकित्सकहरु बताउछन ।
चिकित्सको प्रिस्किृप्सन बिना नै दुखाई कम हुने औषधि एन्टिवायोटिक्स आफू खुशी सेवन गर्दा हरेक दिन कुनै न कुनै घटना घटिरहने गरेको त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डा. सतिस शाह बताउछन । उनी भन्छन, आफू खुशी औषधि सेवन गर्दा यसले पार्ने साइड इफेक्टका बिषयमा धेरैलाई जानकारी छैन । औषधिको प्रयोग गर्न नजान्दा रोग निको हुनुको सट्टा ज्यान सक्छ भन्ने कुरा बिर्सनु हुदैन । औषधिलाई तरकारी किनेर खाएजस्तै विना कसैको सल्लाह सेवन गर्ने बानी बिकास रोकिनु पर्ने विज्ञहरु बताउछन । उनीहरुको भनाई छ, चिकित्सकको सल्लाह विना औषधि सेवन गर्दा एउटा रोग निको पार्न खोज्दा अर्कै रोग बल्जmने संभावना हुन्छ । एन्टिवायोटिक्स आफू खुशी सेवन गर्दा यसले मिर्गौला बिग्रने, कलेजको बिग्रने, आखा लगायत शरीरका महत्वपूर्ण अंगलाई नकारात्मक असर गर्छ । मिर्गौला विग्रनुको प्रमुख कारण अत्यधिक एन्टिवायोटिक्सको सेवन पनि हो, मिर्गौला प्रत्यारोपण विज्ञ डा. श्रेष्ठले भने । अन्दाजका भरमा औषधि खादा धेरै व्यक्ति मिर्गौला विग्रिएर डायलासिस गर्नु पर्ने अवस्था छ । औषधि प्रयोग गर्ने तरीका, सेवन गर्ने समय, सेवन गर्नु पर्ने मात्रा, खानपिनका बिषयमा ख्याल राख्न सकेमात्र रोग निको हुने चिकित्सक बताउछन ।
विरामीले बताएको बयानका आधारमा बजारमा खोलिएका औषधि पशलेले एन्टिवायोटिक्स बच्ने गरेका छन । उनीहरुले अन्दाजका भरमा औषधि बेचेको हुन्छ । चिकित्सकको सल्लाह लिन जादा थप शुल्क तिर्नु पर्ने भएकाले अधिकांश विरामी औषधि पशलबाटै गम्भिर प्रकृतिका रोगको औषधि समेत आफै किनेर ल्याउछन । टाउको दुखेको सिटामोल, जmाडापखाला लागेको जिवनजल जस्ता ओषधि आफै पनि किनेर ल्याउदा त्यति फरक पर्दैन । तर स्वासप्रस्वास, ग्यास्टिक, गर्भपतन गराउनेसम्मका औषधि विना चिकित्सकको सल्लाह किनेर सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असरलाई कसैले पनि ध्यान दिने गरेको पाइदैन । आवश्यक भन्दा बढी डोज औषधि सेवन गर्दा रोगसँंग लड्ने प्रतिरक्षात्मक क्षमता नै घट्ने विज्ञहरु बताउछन । लामो समयसम्म दुखाई क मगर्ने औषधि सेवन गर्दा पेन किलर अल्सर, दिसामा रगत देखिने, टाउको दुख्ने, रिंगटा लाग्ने, काम गर्न मन नलाग्ने, निद्रा लागिरहने जस्ता समस्या देखा पर्छन ।
औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रामधारमण प्रसादका अनुसार साइड इफेक्ट कम गर्ने समान्य औषधि रिटामोल, डिकोल्ड, जिवनजल, भिटामिन वी कम्पलेक्स लगायतका औषधि चिकित्सकको सल्लाहबिनै स्वास्थ्यकर्मिको सल्लाह अनुसार सेवन गर्न सकिने भएपनि एक्टिवायोटिक्स सेवन गर्दा भने चिकित्सकको परामर्श लिनै पर्छ ।
Previous article एनेस्थेरिया विशेषज्ञको अभाव
Next article ल्याव असिस्टेटका भरमा स्वास्थ्य प्रयोगशाला